Mashruuca Domino: Ku Kalsoonow Naftaada Qorista Caqabada | Martech Zone
Tuesday, May 31, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Taageere ahaan Mashruuca Domino, Waan kaqeyb qaadanayaa Ku Kalsoonow Adigu Qorista Caqabada, taas oo ah "Hindisaha khadka tooska ah iyo caqabadaha qorista ee 30-maalmood oo kugu dhiirigelinaya inaad gudaha eegto oo aad naftaada aaminto." Maalin kasta, waxaan heli doonaa qoraal deg deg ah adoo adeegsanaya email, oo aan ku dhejin karo balooggeyga, ku qori karo joornaalkeyga, iwm. Dunida baraha wax lagu qoro, waxaan mararka qaar nafteenna ku lumineynaa noocyada aan isku dayeyno inaan maalin kasta iibino. Waxaan u maleynayaa in mashruucani uu yahay hab fiican oo lagu barto qoraal shaqsiyeed iyo baloog garaynta taas oo kor u qaadi doonta xirfadaha baloog gareynta shirkadaha
Laga bilaabo maanta, bilow qorista qoraal ama qoraal laga soo xigtay adigoo raacaya waxqabadyo oo ay bixiyeen noocyo kala duwan qorayaasha ku lug leh mashruucan. Nagala soo qaybgal tartankan, oo waxaad xor u tahay inaad nala wadaagto qoraaladaada!